Zvakanakira oiri oiri, dzidza kuti ungagadzirira sei kumba | Bezzia
Zvakanakira oiri oiri, dzidza kuti ungagadzirira sei kumba
Pau heidemeyer | | Nutrition, Utano
Midzi yeginger yakagwinyaIcho chikafu chisingangodyiwa chete mukondinendi yeAsia, kwemakore mazhinji, muSpain semuenzaniso, yakawanikwa zvese kuitora mumachira kana kuishandisa kubika chikafu chinoshamisa.
Pachiitiko ichi, tinoda kutaura nezvekuti ndeapi mabhenefiti atinopihwa nemafuta ejinja uye nemabatiro aungaaita nenzira yakapusa kumba, nekuti zvinokutendera kwete kungo chengetedza chako chekunze asiwo hutano hwemukati.
Ginger mafuta anogona kutibatsira kubata nekuvandudza yedu yekugaya system, iyo zvakare inotibvumidza isu kugadzirisa marwadzo eArthritis uye nekuvandudza ganda redu. Kana iwe uchida kutsvaga mashandisiro ayo ese, mabhenefiti uye nemabatiro aungaite iwe kumba, ramba uchiverenga chinyorwa chedu.
1 Hunhu hwejinja
2 Chii chaizvo chinonzi ginger mafuta?
3 Ginger mafuta anobatsira
3.1 Iyo yakasikwa inorwisa-kuzvimba
3.2 Deredza kusvotwa
3.3 Chengetedza ganda redu uye majoini edu
3.4 Mamwe mabhenefiti ekufunga
4 Dzidza maitiro ekugadzirira ginger mafuta kumba
5 Unogona sei kushandisa ginger mafuta?
5.2 Kushandisa kumusoro
Chekutanga pane zvese, ngatirangarirei kuti ndeapi maitiro eiyi mudzi wakakurumbira. Zita rayo resainzi ndi Zingiber officinaleIcho chirimwa chinokosheswa kune ese ayo ekurapa uye ekugadzirira mashandisiro. Chii chinonyanya kushandiswa, uye chatinoziva zvakanyanya nezvacho, ndiyo rhizome, mudzi. Idzinde repasi pevhu rinomera rakatwasuka uye haringoshandisirwe kugadzirira tii chete, inotibvumidzawo kuti tishandise muzvidimbu, seyakagadzirwa kana mumafuta.
Nezve kushandiswa kwekurapa kwe ginger, takaona kuti inotibvumidza kurapa kusagadzikana kwekugaya, kubvisa marwadzo eArthritis, kutitadzisa kuwana dzungu uye kudzikisa kusvotwa kunokonzerwa nepamuviri. Kutevera, Isu tichakuudza kuti chii chaizvo chinonzi ginger mafuta uye kuti ingabatsira sei pahutano hwako.
Chii chaizvo chinonzi ginger mafuta?
Ginger mafuta chinhu chine mafuta chinowanikwa kubva pamudzi uyu nekuchiisa kune distillation maitiro. Mafuta akaunganidzwa anotorwa ari yeyero muvara uye kunhuwirira kwawo kunoonekwa nekuva zvinonhuwira uye zvine simba.. Iko kushandiswa kwemafuta aya anoshandiswa zvese kumaindasitiri ekurapa uyezve kune indasitiri yezvizoro.
Ginger mafuta anobatsira
Isu takafungidzira kuti ginger mafuta ane hutano kwazvo kumuviri wedu, mabhenefiti aanounza kwatiri anogona kuve makuru zvekuti mushure mekuverenga chinyorwa ichi, iwe uchazoda kuzvigadzirira iwo mafuta kumba. Heano maitiro ayo anogona kukubatsira iwe.
Iyo yakasikwa inorwisa-kuzvimba
Ginger mafuta ane anti-anogumbura ehupfumi, anogona kudzivirira shanduko muitsvo basa inosanganisirwa nekuzvimba. Inogona kudzivirira itsvo, uye nokudaro ichivandudza mashandiro ayo.
Kune rimwe divi, zvakare inobvumidza kudzikisira kusingaperi kuzvimba, mafuta aya anobatsira kusimudzira majoini emuviri wedu.
Pakupedzisira, kuwedzera gin mafuta emafuta pakudya kunogona kudzivirira kuwedzera uye kudzora mamaki ekuzvimba. Mukuwedzera, inowedzera metabolism yedu uye inotibvumidza kupisa mamwe macalorie.
Zvinoenderana nemushonga wechivanhu, kana tichifema mweya weginger, kusvotwa kunogona kubviswa. Chii chimwe, Oiri iyi yakaedzwa kuti idzivise mushure mekushanda. UyeMune mhedzisiro, zvakaonekwa kuti avo vakatora chikamu vaive nematanho akaderera ekurutsa pane avo vakatora placebo.
Chengetedza ganda redu uye majoini edu
Mafuta eGinger anoita seanopa antioxidant ane simba, kana akasanganiswa neimwe kirimu uye mamwe mafuta akakosha, inoderedza hukasha hweganda.
Kana isu tikazora ginger mafuta paganda redu, zvinodzora kuomarara uye kuzvimba kweArthritis, Nekudaro, hazvisi pachena zvachose kuti inogona kuve chishamiso mushonga weichi chiitiko, asi inogona kudzikamisa maronda zvishoma.
Mamwe mabhenefiti ekufunga
Zvimwe zvakanaka iyo yatinogona kuratidza nezve ginger mafuta ndeiyi:
Iyo yakasikwa aphrodisiac: Inoita seyakasikwa aphrodisiac uye inoshandiswa kugadzirisa matambudziko ekusagadzikana kwe erectile.
Zvinotibatsira kudzikisira kushushikana: Pamushonga weAyurvedic, oiri yeginger inoshanda pakurapa matambudziko epamoyo sekutya, kusavimba, kushushikana kana kusiiwa.
Iyo inobvumidza kurapwa mudumbu uye mamwe matambudziko ekugaya: Ginger midzi yakakosha mafuta ndeimwe yemishonga yechisikigo yekugaya, manyoka uye colic.
Inobvumira bvudzi kukura. oiri yeginger yanga ichishandiswa mumashampoos uye zvimwe zvinogadzirwa nemhedzisiro yayo pakukura kwebvudzi. Chimwe chezvinhu zvaro zvinoshanda zvakawanikwa kudzvinyirira bvudzi kukura mumhuka.
Dzidza maitiro ekugadzirira ginger mafuta kumba
Oiri iyi inogona kugadzirirwa kubva kunyaradzo yeimba yako nezvinhu izvi nemirairo.
Kuti uite iyi nzira yakapusa, iwe unozoda:
Iwe unofanirwa kusvuura ginger, kuicheka kuita zvidimbu zvidiki uye woenderera mberi uchiidzora.
Wedzera ginger zest mundiro yemafuta emuorivhi.
Sanganisa, chiise muchoto pane tembiricha yakaderera, 100ºC kwemaawa maviri.
Ipo iri muchoto, gadzira mudziyo wakavharwa nejira jena rakachena.
Kana maawa maviri apera, simbisa musanganiswa kuburikidza nemucheka, kana kana uine strain yejira, ishandise.
Dzvinya uye rega zororo rinoguma rizare mumudziyo wegirazi unodzivirira.
Zvichengetedze munzvimbo inotonhorera uye yakaoma kunze kwezuva rakananga.
Unogona sei kushandisa ginger mafuta?
Mukicheni, oiri yeginger inoshandiswa kuravira, inowedzera kunhuhwirira uye inowedzera chikafu. Inofanirwa kushandiswa muhuwandu hwakati wandei nekuda kwehunhu hwayo hunoparadza inofanira kusanganiswa nemamwe mafuta uye isingashandiswe yega semafuta ekutanga ari mundiro.
Oiri iyi inogona kushandiswa se aromatherapy, inogona kushandiswa nerubatsiro rwekuparadzira kana eerosol, uye zvakare, inoshandiswa nemhepo inhalers. Nekuparadzira iwe unofanirwa kuteedzera rairo yemhando yaunayo. Iwe unozofanirwa kusanganisa musanganiswa wemafuta ejinja nemvura.
Sezvo isu tanga tichifambira mberi, ginger mafuta inogona kuiswa paganda redu, asi isu tinogara tichikukurudzira kuti uimhure nemafuta anotakura, dzimwe nguva coconut, avocado kana almond mafuta anoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvakanakira oiri oiri, dzidza kuti ungagadzirira sei kumba
Masitayera ane raincoat, mubatsiri mukuru muchirimo
Makirimu iwe unofanirwa kubvisa maronda pachiso chako